PDF कसरी खोज्ने | समाचार ग्याजेटहरू
लौरा Torres प्लेसहोल्डर छवि | 12/05/2022 11:21 | सामान्य, सफ्टवेयर
के तपाईलाई धेरै लामो PDF मा शब्द खोज्न आवश्यक छ तर तपाईलाई यो कसरी गर्ने थाहा छैन? यसलाई मैन्युअल रूपमा गर्ने आधारभूत प्रविधिलाई बिर्सनुहोस्, तपाईंले शब्द फेला नपाएसम्म पृष्ठमा जाने, त्यहाँ PDF खोज्ने द्रुत र सजिलो तरिका हो।
त्यसकारण, यस लेखमा हामी चरणबद्ध रूपमा व्याख्या गर्न जाँदैछौं कसरी पीडीएफ खोजी गर्ने एउटा उदाहरणको साथ ताकि तपाईलाई यस विस्तारको साथ फाइलहरूमा सर्तहरू फेला पार्न समस्या नहोस्।
खुला ढाँचा बनेपछि, PDF कागजातहरू अधिक सामान्य भएको छ किनभने जुनसुकै यन्त्रमा हेरिएको भए तापनि तपाईंको डिजाइनको अखण्डता कायम राख्नुहोस्: कम्प्युटर, स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, आदि।
कहिलेकाहीँ तपाईंले तथ्य पुष्टि गर्न, महत्त्वपूर्ण जानकारी फेला पार्न, वा केवल जिज्ञासाको कारणले PDF कागजातमा शब्द खोज्न आवश्यक छ। सौभाग्य देखि, यो एक छिटो र सजिलो अपरेशन छ।
PDF मा शब्दहरू खोज्न, हामी आधिकारिक Adobe अनुप्रयोग प्रयोग गर्नेछौं, पीडीएफ ढाँचा आविष्कार गर्ने कम्पनी। Adobe Acrobat Reader DC एउटा नि:शुल्क कार्यक्रम हो, जसमा कुशल खोज इन्जिन समावेश छ, र यो स्पेनिश भाषामा पनि छ, जसले हामीलाई चीजहरू सजिलो बनाउँछ।
1 तपाईंले सुरु गर्नु अघि: कार्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस्
1.1 पहिलो चरण: शब्द वा शब्दहरूको लागि PDF कसरी खोज्ने।
1.2 दोस्रो चरण: थप विशिष्ट खोज
2 धेरै PDF कागजातहरूमा पाठ खोज्नुहोस्
2.1 एकै पटक धेरै फाइलहरूमा खोज्नुहोस्: पछ्याउने चरणहरू
3 म कसरी खोज परिणामहरू समीक्षा र बचत गर्न सक्छु?
तपाईंले सुरु गर्नु अघि: कार्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाइँसँग PDF पढ्ने कुनै प्रोग्राम स्थापित छैन भने, तपाइँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एक्रोब्याट रिडर डीसी तपाईको वेबसाइटबाट। सावधान रहनुहोस्, किनकि पूर्वनिर्धारित रूपमा यसले McAffee एन्टिभाइरस डाउनलोड र स्थापना गर्दछ। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्न भने, यो विकल्प अनचेक गर्नुहोस्।
कार्यक्रम स्थापना भएपछि, जानुहोस् menu अभिलेख र PDF खोल्नुहोस् जहाँ तपाईं खोज्न चाहनुहुन्छ। अधिकांश समय, प्रणाली कन्फिगरेसनको कारणले गर्दा, फाइल स्वचालित रूपमा Acrobat Reader DC सँग खुल्नेछ जब तपाइँ कागजातमा क्लिक गर्नुहुन्छ।
पहिलो चरण: शब्द वा शब्दहरूको लागि PDF कसरी खोज्ने।
अर्को, तपाइँ शीर्ष मेनुमा जान आवश्यक छ सम्पादन गर्नुहोस् र विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् सर्च दूरबीन प्रतीकको छेउमा। अर्को छिटो विधि कुञ्जीपाटी आदेशहरू प्रयोग गर्नु हो यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने:
आदेशहरू थिच्नुहोस् CTRL + F यदि तपाइँ विन्डोज प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ वा सीएमडी + एफ यदि तपाइँ म्याक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने। एउटा खोज विन्डो खुल्नेछ जहाँ तपाईले खोज्न चाहनुभएको शब्द टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो आदेश सम्झनाको लागि, तपाइँ अंग्रेजी खोज शब्दको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ: "find", त्यसैले शब्दको पहिलो अक्षर CTRL सँगसँगै छ।
दोस्रो चरण: थप विशिष्ट खोज
थप विस्तृत खोजको लागि, थिच्नुहोस् CTRL + Shift + F विन्डोज वा मा सीएमडी + शिफ्ट + एफ Mac मा। यसले खोल्नेछ उन्नत खोजी:
*"Shift" ले तपाईँले एकल ठूलो अक्षर टाइप गर्न प्रयोग गर्ने कुञ्जीलाई बुझाउँछ, जसमा माथि एरो आइकन समावेश हुन्छ। Ctrl माथि रहेको कुञ्जी।
यहाँ तपाईंले हालको फोल्डरमा मात्र होइन, विशेष फोल्डरमा सबै PDF कागजातहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सम्पूर्ण शब्दहरू, बुकमार्कहरू, र टिप्पणीहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। साथै, यदि तपाईं अपरकेस र लोअरकेस अक्षरहरू मिलाउन चाहनुहुन्छ भने संकेत गर्न चेक बाकस छ।
धेरै PDF कागजातहरूमा पाठ खोज्नुहोस्
Acrobat Adobe PDF एक कदम अगाडि जान्छ, तपाईं एकै पटक धेरै कागजातहरू खोज्न सक्नुहुन्छ!। खोज विन्डोले तपाईंलाई एकै पटक धेरै PDF कागजातहरूमा शब्दहरू खोज्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाइँ सबै PDF कागजातहरू खोज्न सक्नुहुन्छ वा विशेष स्थानमा PDF पोर्टफोलियोहरू खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि कागजातहरू इन्क्रिप्टेड छन् (सुरक्षा उपायहरू लागू गरिएका छन्), तिनीहरूलाई खोजमा समावेश गर्न सकिँदैन भनेर तपाईंले ध्यानमा राख्नु पर्छ। त्यसकारण, तपाईले यी कागजातहरू एक-एक गरेर खोल्नु पर्छ प्रत्येक फाइललाई व्यक्तिगत रूपमा खोज्नको लागि। यद्यपि, Adobe Digital Editions को रूपमा एन्कोड गरिएका कागजातहरू यस नियमको अपवाद हुन् र खोज्नका लागि कागजातहरूको समूहमा समावेश गर्न सकिन्छ। यसपछि हामी त्यहाँ जान्छौं।
एकै पटक धेरै फाइलहरूमा खोज्नुहोस्: पछ्याउने चरणहरू
डेस्कटपमा Acrobat खोल्नुहोस् (वेब ब्राउजरमा होइन)।
निम्न मध्ये कुनै एक कार्य गर्नुहोस्।- खोज उपकरणपट्टी मा, तपाईले खोज्न चाहनुभएको पाठ टाइप गर्नुहोस्, र त्यसपछि चयन गर्नुहोस् खोल्नुहोस् पूर्ण खोज पप-अप मेनुमा Acrobat को। खोज बाकसमा, तपाईले खोज्न चाहनुभएको पाठ टाइप गर्नुहोस्।
यस विन्डोमा, सबै PDF कागजातहरू चयन गर्नुहोस्। विकल्पको ठीक तल पप-अप मेनुमा, चयन गर्नुहोस् कहाँ खोज्नुहोस्.
स्थान चयन गर्नुहोस् आफ्नो कम्प्युटर वा नेटवर्कमा र क्लिक गर्नुहोस् स्वीकार.
थप खोज मापदण्ड निर्दिष्ट गर्नक्लिक गर्नुहोस् उन्नत विकल्पहरू देखाउनुहोस् र उपयुक्त विकल्पहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
मा क्लिक गर्नुहोस् सर्च.
टिपको रूपमा, खोजको क्रममा, तपाईंले परिणामहरूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ वा खोजमा अवरोध नगरी परिणामहरू स्क्रोल गर्न किबोर्ड आदेशहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ रोक्नुहोस् प्रगति पट्टी तल, खोज रद्द गरिएको छ र परिणामहरू अहिलेसम्म फेला परेका घटनाहरूमा सीमित छन्। खोज सञ्झ्याल बन्द हुँदैन र परिणामहरूको सूची खाली गरिएको छैन। त्यसैले, थप परिणामहरू हेर्न, तपाईंले नयाँ खोज चलाउनु पर्छ।
म कसरी खोज परिणामहरू समीक्षा र बचत गर्न सक्छु?
खोज सञ्झ्यालबाट खोज प्रदर्शन गरेपछि, नतिजाहरू पृष्ठ क्रममा प्रदर्शित हुन्छन्, प्रत्येक खोजी कागजातको नाम अन्तर्गत पुन: समूहबद्ध हुन्छन्। सूचीमा प्रत्येक वस्तुमा सन्दर्भ शब्द (यदि लागू भएमा) र घटनाको प्रकारलाई संकेत गर्ने प्रतिमा समावेश हुन्छ।
खोज परिणामहरूमा एक विशेष उदाहरणमा जानुहोस्। यो व्यक्तिगत PDF मा मात्र गर्न सकिन्छ।
- आवश्यक भएमा, खोज परिणामहरू विस्तार गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई PDF मा हेर्नको लागि परिणामहरूमा एउटा उदाहरण चयन गर्नुहोस्।
- अन्य उदाहरणहरू हेर्न, परिणामहरूको अर्को उदाहरणमा क्लिक गर्नुहोस्।
खोज परिणामहरूमा उदाहरणहरू क्रमबद्ध गर्नुहोस्। मेनु विकल्प छान्नुहोस् अर्डर खोज विन्डो को तल मा द्वारा। तपाईं सान्दर्भिकता, मिति परिमार्जन, फाइल नाम, वा स्थान द्वारा परिणाम क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ।
खोज परिणामहरू बचत गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो खोज परिणामहरू PDF वा CSV फाइलको रूपमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा CSV फाइल एउटा टेबलबाट बनेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई खोल्नको लागि तपाईंले यसलाई एक्सेल प्रोग्राममार्फत गर्नुपर्छ। समाप्त गर्न, आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् फ्लपी डिस्कमा र परिणामहरूलाई PDF को रूपमा बचत गर्न वा CSV को रूपमा परिणामहरू बचत गर्न छनौट गर्नुहोस्।
मलाई आशा छ कि यो जानकारी तपाईका लागि उपयोगी भएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, PDF मा शब्दहरू फेला पार्नु एकदम सरल कार्य हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » पीडीएफमा खोजी गर्दै